Dhamaan degmooyinka gobolka Bryansk, shirkadaha ganacsiga ayaa wali wada goosashada dalaga hadhuudhka, rapeseed iyo baradhada.
Sida laga soo xigtay dawladda gobolka, marka la gaaro 27-ka Luulyo, waxay ku guuleysteen inay sarreen ku dhawaad ​​177 kun oo tan oo hadhuudh ah 41 kun oo hektar. Wadarta guud ee goosashada ee hadhuudhka iyo dalagyada laxaadka leh waa 299 kun hektar.
Ilaa iyo hadda, toban iyo toban gobol, rapeseed ayaa laga goostay dhul qiyaastii ah 11 kun oo hektar - in kabadan 37 kun oo tan oo iniino ayaa lagu tuntay. Qorshahan waxaa fuliyay 35 boqolkiiba. Soosaarka ugu sareeya ee rapeseed waxaa lagu xusay degmooyinka Sevky iyo Mglinsky ee gobolka.
Iyo degmooyinka Vygonichsky, Zhiryatinsky, Klimovsky, Navlinsky, Novozybkovsky iyo Starodubsky, waxay bilaabeen goosashada baradhada hore. In kabadan 494 kun oo tan ayaa la goostay 12 hektar.
Source: Wararka Bryansk
Tags: Gobolka Bryanskgoosashada baradho